DPA မိုက်ခရိုဖုန်းမိတ်ဆက်နယူးဃ: AES 2015 မှာ screet ™ Slim - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » DPA မိုက်ခရိုဖုန်းမိတ်ဆက်နယူးဃ: screet ™လင်းမ်သည် AES 2015 မှာ
New York, အောကျတိုဘာ 29, 2015 - DPA မိုက်ကရိုဖုန်း ယင်း၏သစ်ကိုကြေညာဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ် ဃ: screet ™လင်းမ်သည်မိုက်ကရိုဖုန်း AES 2015 (Booth 727) မှာ။ အထူးသဖြင့်ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းကနေတစ်ကြီးထွားလာလိုအပ်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတစ်မြို့အနီး-မမြင်ရတဲ့ bodyworn မိုက်ခရိုဖုန်းအဘို့, d: screet ™လင်းမ်သည်တစ်ဦးပြားချပ်ချပ်ဦးခေါင်း၌ကုမ္ပဏီ၏ omnidirectional ဆေးတောင့်ဒြပ်စင် features တစ်သွယ်ကေဘယ်လ်နှင့်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုခလုတ်ကို-ပေါက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း mount ။ လောလောဆယ်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အထင်ရှားဆုံးသောအသံအင်ဂျင်နီယာများအချို့နှင့်အတူ beta ကို-စမ်းသပ်မှုအဆင့်ဆင့်အတွက်, ဒီသစ်ကိုဖြေရှင်းချက်ပြီးသားစည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းရရှိမှုဖြစ်ပါတယ်။
မိုက်ခရိုဖုန်းရဲ့အသစ်ခလုတ်ကို-အပေါက်တစ်ခုပူးတွဲဆက်စပ်ပစ္စည်းအဖြစ်ကြွလာတော်မူသော, mount, cable ကိုအစားဖြောင့်ထွက်ကပ်ထက်မျက်နှာပြင်ဆန့်ကျင်ပြားချပ်ချပ် တင်. ခွင့်ပြု, တစ်ဦး 90 ဒီဂရီအသံက input ကိုထောင့်ပေးပါသည်။ ဒါဟာအစနှစ်ခုကိုမီလီမီတာကဲ့သို့သေးငယ်တဲ့အာကာသသို့ fit မှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ မြင်ရခံရမပါဘဲလုံးဝနီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆိုထားရှိနိုင်ပါသည်အဖြစ်အရွယ်အစားနှင့်မရရှိနိုင် accessories များပေါင်းစပ် mounting ဖြေရှင်းချက်များ၏အရေအတွက်တိုးပွားစေပါသည်။
"ဟုအဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူစကားပြောပြီးနောက်ကျနော်တို့မိုက်ခရိုဖုန်းဖုံးကွယ်ခံရပုံကိုတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့် ယူ. ကြှနျုပျတို့သညျဤလိုအပ်ချက်ဖြေရှင်းရန်နိုင်မယ့်လုံးဝအသစ်နှင့်ထူးခြားသောလမ်းဖွံ့ဖြိုးပြီး," Mikkel Nymand, DPA မိုက်ခရိုဖုန်းများအတွက်ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာကရှင်းပြသည်။ "ဒီရလဒ်ပိုမိုလွယ်ကူစွာအဝတ်အစားတွေအောက်မှာဝှက်ထားသောမိုက်ကရိုဖုန်း, ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အသစ်ကဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုအဆိုပါကောင်းတဲ့အရာကမြှောက်ခြေရာ, ဒါပေမယ့် DPA လူသိများသောအဘို့တူညီတဲ့အရည်အသွေးမြင့်အသံနှင့်အရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ "
အဆိုပါဃ: အနိမ့် Self-ဆူညံသံနှင့်အတူ screet ™လင်းမ်သည်ကမ်းလှမ်းမှုကိုခြွင်းချက်အသံအရည်အသွေးကို: မြင့်သော sensitivity ကိုနှင့်ဃတွင်အသုံးပြုထားသောအနိမ့် sensitivity ကိုအတူ 4060 ဆေးတောင့်အတူ screet ™ 4061 ဆေးတောင့်။ အားလုံး DPA မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်ဝသကဲ့သို့, ဒီနောက်ဆုံးပေါ်ဖြေရှင်းနည်းအားလုံးအဓိကကြိုးမဲ့ Adapter ကနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ , အဝါနုရောင်ရှိသောအဖြူရောင်, အနက်ရောင်နှင့်အညိုရောင် - ဒါဟာလေးခုအရောင်ရွေးချယ်မှုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ DPAs လက်ရှိရရှိနိုင်ဖုံးကွယ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုသနျ့ကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြသနှင့်ဖုံးကွယ်ထိပ်အခြေစိုက်စခန်းလွတ်လပ်စွာဖယ်ရှားခံရဖို့ထိပ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခွင့်ပြုသည့်အဝတ်အစားမှာ fixed စောင့်စေခြင်းငှာခွင့်ပြုသည့်ဖုံးကွယ်အခြေစိုက်စခန်းထံမှခွဲခြားနိုင်ပါသည်အဓိပ္ပာယ်, သီးခြားဆောက်လုပ်ရေး features လျက်ရှိသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုဖုံးကွယ်အတူအဝတ်အစားမှတစ်မူထူးခြားသောသစ်ကိုလိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့အာကာသ bracket ကလုံလုံခြုံခြုံအကွာအဝေးလာပါတယ်။ ဤသည်အာကာသ bracket ကအဆိုပါဖုံးကွယ်ထိပ်တန်း၏အတွင်းနှင့်ထွက်နှိပ်လိုက်ရင်။
ဒါ့အပြင်အဆိုပါဖုံးကွယ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုလိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့အဝတ်အစားကလစ်ဆိုဃ၏ဝှက်ထားသောအထိုင်အဘို့ခွင့်ပြု: တစ်ရှပ်အင်္ကျီအတွက်အသေးစားမိုက်ကရိုဖုန်း™ screet ။
"အများစုကအသံကပညာရှင်များပြီးသား DPA ရဲ့ဃနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေသောခေါင်းစဉ်: screet ™ဖြေရှင်းချက်" Nymand ကထပ်ပြောသည်။ "ဒီဃ: screet ™လင်းမ်သည်ယခုအပြတ်အသတ်အသစ်ကဖြစ်နိုင်ခြေသူတို့နှင့်အတူပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အမြဲတမ်း DPA သံကိုလိုချင်ပေမယ့်တစ်ဦးသည် ပို. ပင်အတားအဆီးဖြေရှင်းချက်လိုအပ်ကြသူအသံပညာရှင်များရောက်ရှိဖို့အထူးသဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ "
အဆိုပါဃ: လင်းမ်သည်အသေးစားမိုက်ခရိုဖုန်း™ screet 2015 ၏အဆုံးအားဖြင့်ဖြန့်ဝေဘို့မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ DPA မိုက်ကရိုဖုန်း isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2015-10-29
ယခင်: CCW 2015 ကုန်ပစ္စည်းကို Preview မှာ Riedel ဆက်သွယ်ရေး
နောက်တစ်ခု: POLECAM မှာအသုံးပွုတဲ့ PICO Ultra နှေးပြကွက်ကင်မရာများအသုံးပြု FOR တင်ပြ SPORTS Awards